How'd it happen and more reports?: မြေယာဥဒေ( Land Law)
မြေငှားစာချုပ်ဖြင့် ငှားရမ်းနေထိုင်သော မြေအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ မြေငှားစာချုပ်ပြုလုပ်၍ အသိအမှတ် ပြုထားခြင်းဖြစ်သည်။
၁၈၅၃- ခုနှစ် မှ စတင်ထုတ်ပေးခဲ့သည်။ ပထမပိုင်း နှစ်တိုဂရန်မြေများကိုသာ ထုတ်ပေးခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းဂရန်ကို ကော်မရှင်နာ မင်းကြီးချုပ်၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ထုတ်ပေးသည်။
မြေငှားစာချုပ်ထုတ်ပေးရာတွင် ပြုပြင်ပြီးမြေနှင့် မပြုပြင်ရသေးသော မြေဟူ၍ နှစ်မျိုးရှိသည်။ ပြုပြင်ပြီးမြေကို နှစ်တိုနှစ်ရှည် ဂရန် ထုတ်ပေးနိုင်သည်။ မပြုပြင်ရသေးသည့် မြေကို ဂရန်မပေးနိုင်။ သို့သော် စနစ်တကျ အကွက်ရိုက်ပြီး အဖွဲ့မှ အတည်ပြုလျှင် ဂရန်ထုတ်ပေးနိုင်သည်။
မြို့မြေများကို ဂရန်၊လိုင်စင်ချထားပေးရာတွင် လူနေထိုင်၇န် စက်မှုလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရန် ၊ အများအတွက် အသုံးပြုရန် ၊ သာသနာမြေအတွက် အသုံးပြုရန်နှင့် ဂရန်ကို နိုင်ငံတော် အစိုးရက အမိန့်ကြော်ငြာစာ ထုတ်၍သတ်မှတ်သည်။
ဂရန်၏ သဘောမှာ လူနေထိုင်ရန် စက်မှုလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ရန် သက်တန်းကို တစ်ကြိမ်လျှင် နှစ်(၃၀) နှုန်းဖြင့် နှစ် (၉၀) အထိ အငှားစာချုပ် ချုပ်ဆိုပေးသည်။
အငှားဂရန် သို့မဟုတ် ပတ္တာဆိုသော စာချုပ်မှာ (၁၀) နှစ် သက်တမ်းရှိပြီး နှစ်ကုန်ဆုံးလျှင် ဂရန်အသစ်လဲလှယ်ခွင့်မရှိ။ အသစ်ထပ်မံ လျှောက်ထားရသည်။
ဂရန်မြေပိုင်သူသည် ရောင်းခြင်း၊ လွှဲပြောင်းခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်ပြီး ပိုင်ဆိုင်မှုကို ဆက်လက်ခံစားခွင့်ရှိပေသည်။
(၁) ဂရန်မြေကို ခွဲစိတ်ပေးရန်လျှောက်ထားခြင်း
ဂရန်မြေ ခွဲစိတ်လိုသော် ဦးစွာပထမ (ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ၊ မြို့ပြမြေယာ စီမံခန့်ခွဲမှု စာရင်းနှင့် မှတ်တမ်း ထိန်းသိမ်းရေးဋ္ဌာန) ၊ မြေတိုင်းဌာနခွဲသို့ မြေ၏ နယ်နိမိတ်သတ်လေးရပ်ကို တိုင်းတာထားသော မြေတိုင်းမြေပုံ (Demarcation Map) ရရှိရန်လျှောက်ထားရသည်။
အဆိုပါမြေတိုင်းမြေပုံရရှိပါက ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ၏ အသိအမှတ်ပြု လိုင်စင်ရအင်ဂျင်နီယာ အတည်ပြုလက်မှတ် ရေးထိုးသော မြေကွက်ခွဲစိတ်ပုံစံ ပြုလုပ်ရသည်။
ယင်းမြေကွက် ခွဲစိတ်ပုံစံရရှိပါက မြို့ရွာအိုးအိမ် ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန မြေတိုင်းဌာနခွဲသို့ ဦးပိုင်မြေကွက် ခွဲစိတ်မြေပုံ ရရှိရေးအတွက် သတ်မှတ်ထားသော ပုံစံအတိုင်း ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်လိုသည်။
ထိုသို့လျှောက်ထားရာတွင် လိုင်စင်ရအင်ဂျင်နီယာ၏ အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးထားသော မြေကွက်ခွဲစိတ် ပုံစံမူရင်းကို ပူးတွတြင်ပြရသည်။
ခွဲစိတ်ခွင့်ပြုရန် လျှောက်ထားသော မြေသည် မြေဧရိယာ ၂၄၀၀ စတုရန်းပေရှိရမည်ဖြစ်သည်။သို့သော်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေပေါ်မူ တည်၍ အနည်းဆုံး ၁၂၀၀ စတုရန်းပေကိုသာ ခွင့်ပြုသည်။ခြွင်းချက်အနေဖြင့် ရန်ကုန်စည်ပင်သာယာ နယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ ကန့်သတ်ထားသော နယ်မြေ ဖြစ်ပါက အနည်းဆုံး ၀.၂၀၀ ဧကကိုသာ ခွဲစိတ်ခွင့်ပြုသည်။
နောက်ဆုံးအဆင့် ခွဲစိတ်ပြီး ဂရန်မြေများကို သီးခြားဂရန်မြေ (မြေငှားစာချုပ်) ထုတ်ပေးရန် လျှောက်လွှာ ပုံစံနှင့်အတူ ၊ရန်ကုန် မြို့တော်စည်ပင်သာယာ ရေးကော်မတီ မြို့ပြစီမံခန့်ခွဲမှု စာရင်းနှင့်မှတ်တမ်း ထိန်းသိမ်းရေးဌာနသို့ အောက်ဖေါ်ပြပါ လိုအပ်ချက်များဖြင့် ပူးတွဲလျှောက်ထားရသည်။
(က) မြို့ရွာနှင့် အိုးအိမ်ဖွံဖြိုးရေးဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပေးသော သက်သေခံ မြေကွက် ခွဲစိတ်ပုံ မြေပုံမိတ္တူ ။(မြေတိုင်းဌာနခွဲမှ
(ခ) အဆင့်ဆင့်လွှဲပြောင်းသည့် မှတ်ပုံတင်စာချုပ်မိတ္တူများ၊
(ဂ) မြေငှားကြွေးကျန် ကင်းရှင်းကြောင်း ထောက်ခံစာ၊
(ဃ) လျှောက်ထားသူ၏ အမျိုးသားမှတ်ပုံတင် (သို့) နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကဒ်ပြားဓာတ်ပုံမိတ္တူ၊
(စ) ၄င်းမြေကွက်အတွက် ခွဲစိတ်ထားခြင်းနှင့် ပတ်သက်သော အထောက်အထားစာချုပ်စာတမ်း မိတ္တူများ၊
ဂရန်မြေ၏ ပိုင်ရှင်အမည်ပေါက် ပြောင်းလိုလျှင် လိုအပ်သော အချက်များကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်.........
• ပြောင်းလိုသူ၏အမည်ဖြင့် ဝယ်ယူထားသောမှတ်ပုံတင်စာချုပ်လိုပါတယ်။
ဝယ်တာမဟုတ်လည်း အမွေရတာ၊ စွန်.လွှတ်ကြတာ၊ တရားရုံးကအနိုင်ပေးတာစတဲ့ ခိုင်မာတဲ့စာချုပ်စာ တမ်းတင်ပြဖို.လိုပါတယ်။
• လျှောက်ထားသူရဲ.မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊ ပိုင်ဆိုင်ကြောင်းစာချုပ်နှင့် မြေခွန်ကြွေးကျန်ကင်းရှင်းကြောင်းတို. တွဲတင်ရမှာပါ။
အားလုံးပြည်စုံမှန်ကန်တယ်ဆိုရင် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီကပဲ အမည်ပြောင်းလဲခွင့်အမိန်.ချမှာပါ။ (မူရင်းဂရန်ပေါ်မှာ မင်နီနဲ.အမည်ပြောင်းပေးလေ့ ရှိပါတယ်)
ရန်ကုန်မြို.တော်စည်ပင်သာယာ၏ အမိန်. ၃/၂၀ဝ၁ - အပိုဒ် ၄(င)၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များအရ “ဂရန်မြေပိုင်ဆိုင်ခွင့်အမည်” လွဲပြောင်းပေးခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။
• လျှောက်ထားသူ၏ ID မိတ္တူ ၊ ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း အထောက်အထားစာချုပ်မူရင်းများ၊ မြေခွန်ကြွေးကျန် ကင်းရှင်းကြောင်း
လိုတာက(၃)ခုထဲပါ။ သို.သော်ပိုင်ဆိုင်ကြောင်းစာချုပ်မူရင်းတွေကတော့ စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ရုံးမှာ စနစ်တကျချုပ်ဆိုထားတဲ့ အမည်ပေါက်စာချုပ်ကလွဲလျှင် ဘာကိုမှလက်မခံဘူးလို.သာ မှတ်ထားကြပါ။
တရားဝင်ရောင်းဝယ်၊ ပေးကမ်း ၊ လွှဲပြောင်းတဲ့စာချုပ်တစ်စောင်မှာ ကိုယ့်အမည်ပေါက်မှသာ “ဂရန်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်အမည်” လွှဲပြောင်းလို.ရမှာပါ။
၁၉၈၇ မရွှေ.ပစ္စည်းကန်.သတ် ဥပဒေနှင့်ငြိစွန်းမှုရှိ/မရှိ စစ်ဆေးပါသည်။အားလုံးပြည့်စုံမှန်ကန်၍ သတင်းစာကန်.ကွက်သူမရှိမှသာခွင့်ပြုပါသည်။မူရင်းဂရန်တွင်သာ အမည်ပြောင်းပေးသည်ကို တွေ.ဖူးပါသည်။
မြေငှားစာချုပ် (ဂရန်) အကြောင်းသိကောင်းစရာများ
မြေငှားစာချုပ် (ဂရန်) အသစ်ထုတ်ပေးခြင်း၊မြေငှားစာချုပ် (ဂရန်) မိတ္တူထုတ်ပေးခြင်း၊ မြေငှားစာချုပ် (ဂရန်) သက်တမ်းတိုးပေးခြင်း ၊မြေငှားစာချုပ် (ဂရန်) ခွဲစိတ်ပေးခြင်း၊မြေအမည်ပေါက်ပြောင်းလဲပေးခြင်း၊ ဒီမြေတွေကို ဂရန်လျှောက်နိုင်သည်။
လိုင်စင်မြေ၊ ပါမစ်မြေ၊ စကွာတာမြေ ဂရန်သစ်လျှောက်လျှင် ဘာတွေလိုသလဲ?
# နိုင်ငံသား စီစစ်ရေး ကတ်ပြား
# ပါမစ် (သို့) လိုင်စင် မိတ္တူ
# မှတ်ပုံတင် စာချုပ်စာတမ်း (စကွာတာမြေ)
# နောက်ဆုံးပေးဆောင် ထားသည့် မြေခွန်ပြေစာ (မူရင်း) တို့နှင့်အတူဌာနမှ သတ်မှတ်ပုံစံတွင် ဖြည့်စွက်
အထောက်အထားမိတ်္တူများကို မူရင်းနှင့် တိုက်ဆိုင်စီစစ်ပါသည်။
တင်ပြသည့် အထောက်အထားများနှင့် မြေစာရင်းရှိ အထောက်အထားများ တူညီမှန်ကန်မှု ရှိပါက မြို့နယ်ထွေ/အုပ်ဦးစီး အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရုံးနှင့် ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရုံးများတွင် (၁၄)ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်ရန် ရှိ/မရှိ ကြော်ငြာပါသည်။
အမည်ပေါက် မဟုတ်ပါက သတင်းစာတွင် (၁၄) ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်ရန် ရှိ/မရှိ ကြော်ငြာပါသည်။
ကန့်ကွက်မှု တစ်စုံတစ်ရာ မရှိပါက ဌာနမှ ခွင့်ပြုပေးပြီး သတ်မှတ်ဝန်ဆောင်ခများ ပေးသွင်းရပါမည်။
ပါမစ် (သို့) လိုင်စင် မူရင်းကို ဌာနသို့ အပ်နှံ ရပါမည်။
ဌာနမှူးနှင့် လျှောက်ထားသူတို့သည် နှစ်ဖက်သက်သေ (၁)ဦးစီဖြင့် မြေဌား စာချုပ်ပေါ်တွင် လက်မှတ်ရေး ထိုး၍ မြေငှားစာချုပ် (ဂရန်) ထုတ်ပေးပါသည်။
လျှောက်ထားသူသည် ရရှိသည့် မြေငှားစာချုပ် (ဂရန်) တွင် အခွန်ရုံးမှ မြန်မာနိုင်ငံ တံဆိပ်ခေါင်းခွန် ဥပဒေအရ သတ်မှတ်နှုန်းအတိုင်း အထူးကပ် တံဆိပ်ခေါင်း ကပ်ရပါမည်။
မြေငှားစာချုပ် (ဂရန်) ထုတ်ပေး ခံရသူ အမည်ဖြင့် (၃)လတစ်ကြိမ်၊ (၁)နှစ်လေးကြိမ် စည်းကြပ် သော မြေငှားရမ်းခ (မြေခွန်) ပေးဆောင်ရမည်။
သတ်မှတ်သက်တမ်းကာလ ကုန်ဆုံးသောအခါ ဂရန်စာချုပ် သက်တမ်းတိုး လျှောက်ထားရမည်။
မြေငှား စာချုပ် (ဂရန်) ပျောက်ဆုံး/ပျက်စီးလျှင်
မြေငှားဂရန် စာချုပ်မူရင်း ပျောက်ဆုံးလျှင် သော်လည်းကောင်း၊ ပျက်စီးလျှင် သော်လည်းကောင်း မြေဌားဂရန် စာချုပ်မိတ္တူ လျှောက်ထားနိုင် ပါသည်။
ထိုသို့လျှောက်ထား လာပါက မူလ အမည်ပေါက်ဖြင့်ပင် မြေငှားစာချုပ် (ဂရန်) မိတ္တူမှန် ထုတ်ပေးပါမည်။
မြေငှားစာချုပ် (ဂရန်) ပျောက်ဆုံး/ပျက်စီးလျှင်
# မြေငှားဂရန် စာချုပ် အမှန်တကယ် ပျောက်ဆုံးပျက်စီးကြောင်း တရားရုံး ကျမ်းကျိန်လွှာပျောက်ဆုံးခြင်းကြောင့်
ဖြစ်ပါက မြို့နယ်ထွေ/အုပ်ဦးစီးဌာန အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး ထောက်ခံချက်၊ ရဲစ ခန်းသို့ တိုင်ကြားချက်မှတ်ပုံတင်
စာချုပ်စာတမ်း (သို့) တရားရုံး စီရင်ချက်နှင့် ဒီဂရီအရ လျှောက်ထားခြင်းဖြစ်လျှင် ယင်း အထောက်အထားများ
နောက်ဆုံးပေးဆောင် ထားသည့် မြေခွန်ပြေစာ (မူရင်း) တို့နှင့်အတူ ဌာနမှ သတ်မှတ်ပုံစံတွင် ဖြည့်စွက်၍
မြို့နယ် ထွေ/အုပ်ဦးစီးဌာန အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးနှင့် ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရုံးများတွင် (၁၄) ရက် အတွင်း ကန့်ကွက်နိုင်ကြောင်း ကြော်ငြာခြင်းနှင့် သတင်းစာများတွင် သီးခြားကြော်ငြာခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ပါသည်။
ကန့်ကွက်သူ မရှိ၊ တရားရုံး အမှုအခင်းများ ကင်းရှင်းပြီး မြေပြင်တွင် ပြဿနာ တစ်စုံတစ်ရာ မရှိပါက ဂရန်သစ် ထုတ်ပေးစဉ် သကဲ့သို့ပင် သတ်မှတ်ဝန်ဆောင်ခ ပေးသွင်းစေပြီး မြေငှားဂရန် မိတ္တူ ထုတ် ပေးပါသည်။ ဂရန် မိတ္တူတွင် အခွန်တံဆိပ်ခေါင်း ကပ်ရန် မလိုပါ။
သတ်မှတ်ထားသော သက်တမ်းကာလ ကုန်ဆုံးသောအခါ သက်တမ်းတိုး လျှောက်ထားရမည်။
အမည်ပေါက်သူ၊ မှတ်ပုံတင် စာချုပ် အဆင့်ဆင့်ဖြင့် နောက်ဆုံး ပိုင်ဆိုင်သူ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ပတ်သတ်၍ တရားရုံး စီရင်ချက်နှင့် ဒီဂရီ ရထားသူကသာ လျှောက်ထားနိုင်သည်။
ဌာနမှ သတ်မှတ်ပုံစံ နှင့်အတူ နိုင်ငံသား စီစစ်ရေး ကတ်ပြား၊ သက်တမ်းကုန် ဂရန်နှင့် အမည်ပေါက် ပိုင်သူ မဟုတ်ပါက ပိုင်ဆိုင်မှု စာချုပ်စာတမ်း (သို့) တရားရုံး စီရင်ချက် ဒီဂရီနှင့် နောက်ဆုံးပေး ဆောင်ထားသည့် မြေခွန်ပြေစာ မူရင်းတို့ဖြင့် လျှောက်ထား ရမည်။
ဂရန်သစ် လျှောက်ထားစဉ် ကကဲ့သို့ပင် စီစစ်ပြီး သတ်မှတ်ဝန်ဆောင်ခ ပေးသွင်းစေ၍ မြေငှားဂရန် စာချုပ်အား ထုတ်ပေးပါသည်။
သက်တမ်းကုန်ဆုံးသော ဂရန်အား ပြန်လည်အပ်နှံ ရမည်ဖြစ်ပြီး ဂရန်ပျောက်ဆုံး နေပါက သတ်မှတ် ဒဏ်ကြေးငွေ ပေးဆောင်ရမည်။
မြေငှားဂရန် စာချုပ် ခွဲစိတ်ပေးခြင်း
သက်တမ်းရှိ မြေငှားဂရန် စာချုပ်ကို ဂရန်ခွဲအဖြစ် ထုတ်ပေးနိုင် ပါသည်။
ဌာနမှ သတ်မှတ်ပုံစံ နှင့်အတူ နိုင်ငံသား စီစစ်ရေး ကတ်ပြား၊ ပိုင်ဆိုင်မှု အထောက်အထားများ နှင့်အတူ ဌာနမှ ခွင့်ပြုထုတ်ပေး ထားသည့် မြေကွက်ခွဲ အတည်ပြု ပုံစံနှင့် မြေကွက်ခွဲစိတ် တိုင်းတာသည့် မြေပုံများ တင်ပြရမည်။
အမည်ပေါက် ကိုယ်တိုင်မှ လျှောက်ထားလျှင် သတင်းစာ ကြော်ငြာခြင်း မပြုလုပ်ဘဲ အမည်ပေါက် သူမှ လျှောက်ထားခြင်း မဟုတ်ပါက သတင်းစာတွင် (၁၄) ရက် အချိန်ပေး ကြော်ငြာ ပါသည်။
ကန့်ကွက်သူ မရှိပါက သတ်မှတ် ၀န်ဆောင်ခ ပေးသွင်းစေပြီး မြေကွက် အမှတ်သစ်ဖြင့် ဂရန်ခွဲထုတ် ပေးပြီး မူလမြေငှားဂရန် စာချုပ်အား ပြန်လည်သိမ်းယူ ပါသည်။
မူလမြေငှား စာချုပ်(ဂရန်)၏ အစိတ်အပိုင်းကိုသာ ဂရန်ခွဲထုတ်ခြင်း ဖြစ်ပါက ထိုသို့ဂရန်ခွဲထုတ် ကြောင်းကို မူလမြေငှား စာချုပ်ပေါ်တွင် ရေးမှတ်ပေးပါသည်။
ဂရန်ခွဲ ထုတ်ပေးသူ အမည်ဖြင့် မြေခွန်စည်းကြပ်နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ပါသည်။
မြေပိုင်မြေ၊ မစိုက်ပျိုးသော ဘိုးဘွားပိုင်မြေ၊ ဂရန်ရှိ မြေပိုင်မြေနှင့် သက်တမ်းရှိ မြေငှားဂရန် မြေတို့ကို မြေအမည်ပေါက် ပြောင်းလဲသတ်မှတ် ပေးပါသည်။
ဌာနမှ သတ်မှတ်ပုံစံ နှင့်အတူ နိုင်ငံသား စီစစ်ရေးကတ်၊ မြေပိုင်မြေဖြစ်ပါက အမည်ပေါက် စာချုပ် ဂရန်မြေ ဖြစ်ပါက မြေငှားဂရန်၊ နောက်ဆုံးပေးဆောင် ထားသည့် မြေခွန်ပြေစာ၊ စာချုပ် အဆက်ဆက်ဖြင့် ပိုင်ဆိုင်သူ ဖြစ်ပါက စာချုပ်စာတမ်း၊ တရားရုံး အမိန့်ရရှိထားသူ ဖြစ်ပါက ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ပတ်သတ်၍ စီရင်ချက်နှင့် အမိန့်ဒီဂရီများနှင့် လျှောက်ထားရမည်။
ဂရန်သစ် လျှောက်ထားစဉ် သကဲ့သို့ပင် စီစစ်ပြီး ကန့်ကွက်သူ မရှိပါက သတ်မှတ်ဝန်ဆောင်ခ ပေးသွင်းစေပြီး စာချုပ်မူရင်း (သို့) မြေငှားဂရန် မူရင်းတွင် အမည်ပြောင်းလဲခြင်း မှတ်တမ်းရေး ဖြည့်၍ ပြန်လည်ထုတ်ပေး ပါမည်။ ဂရန်မြေ ဖြစ်ပါက အမည်ပြောင်း၍ မြေခွန်စည်းကြပ်နိုင်ရေး ဆက်လက်ဆောင်ရွက် ပါသည်။
Posted by My Lashio Business
ပါမစ်မြေနှင့် ဂရန်မြေ ဝယ်မယ်ဆိုရင်
မြေကွက်ပိုင်ရှင်အချို့က ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ပါမစ်မြေကို ရောင်းချပြီး နောက်ထပ်ဂရန်အသစ် ပြန်လျှောက်ကာ နောက်ထပ်ဝယ်ယူသူတွေကို ထပ်မံရောင်းချတာမျိုးတွေရှိနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
‘ပိုင်ရှင်တွေက လောဘတက်တာ၊ များသောအားဖြင့် ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ပဲလုပ်တာ၊ ပါမစ်ဝယ်ထားတဲ့လူက ဒုက္ခရောက်တာပေါ့၊ ပါမစ်က အရမ်းခိုင်မာမှုရှိတယ်၊ စာရွက်စာတမ်း ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ အကုန်မှတ်ထားတာ၊ ဂရန်က နာမည်တောင်မပါဘဲ ထွက်ထားတာ’လို့ မြင့်မိုရ်အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင်မှ ဒေါ်သိင်္ဂီမာက ပြောပါတယ်။
စာရွက်စာတမ်းသဘောအရ နိုင်ငံတော်အစိုးရက ချလန်ပေးထားပြီးတော့မှ မြေချပါမစ်ထုတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ မြေချပါမစ်က သုံးစုံရှိပါတယ်။ တစ်စုံကို ပိုင်ရှင်ကိုပေးပြီး ကျန်တဲ့နှစ်စုံကိုတော့ သက်ဆိုင်ရာဌာနက သိမ်းထားပါတယ်။ ပိုင်ရှင်ကိုပေးထားတဲ့ တစ်စုံမှာ ပိုင်ရှင်ရဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံ၊ ဝန်ခံကတိပြုတဲ့စာရွက် သုံးရွက်ပါရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒါဆိုရင် ပါမစ်မြေကို အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်။ ဂရန်လျှောက်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ ပိုင်ရှင်ဆီမှာရှိတဲ့ ပါမစ်စာရွက်စာတမ်း အပြည့်အစုံကို ဌာနကို ပြန်အပ်ပြီးမှ ဂရန်လျှောက်ထားလို့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
‘အမှန်ဆို နှစ်ခုဖြစ်လို့ မရဘူးလေ၊ တချို့က ပါမစ်ကို ပြန်အပ်ရာမှာ မအပ်ဘဲနဲ့ တစ်ယောက်ယောက်ကို ရောင်းတယ်၊ ဒါမျိုးမဖြစ်အောင် မြေဝယ်တော့မယ်ဆိုရင် မြေစာရင်းရုံးမှာ တရားဝင်စစ်လို့ရတယ်၊ ဒါဆိုရင် ပါမစ်စစ်လား မစစ်လား၊ ဂရန်လျှောက်ထားလား မထားလား တရားဝင် စစ်ပြီးရင် ပြဿနာမရှိနိုင်ပါဘူး’လို့ ကောင်းကောင်း(၂) အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်မှ ဦးအောင်မိုးကျော်က ပြောပါတယ်။
တချို့မြေကွက်ပိုင်ရှင်တွေက သူတို့အရင်ရောင်းထားပြီးသား ပါမစ်မြေကွက်တွေကို နောက်လူကို ထပ်ရောင်းချင်တာကြောင့် သူတို့ဆီမှာရှိနေသေးတဲ့ အထောက်အထားအချို့နဲ့ နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာမှာ ကြော်ငြာတွေထည့်ပါတယ်။ မြေကွက်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ လက်ရှိပိုင်ရှင်က အဲသည် ၎င်းကြော်ငြာစာကို မတွေ့ခဲ့ရင် ဂရန်ရသွားနိုင်ပြီး အဲသည်အခါမှာ ဝယ်ယူထားတဲ့မြေကွက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အရှုပ်အရှင်းတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
‘ဒီလိုတွေမဖြစ်အောင် ပါမစ်နဲ့ ဝယ်ထားတဲ့ စာချုပ်၊ ပါမစ်က အတုလုပ်လို့ရတာကြောင့် ပါမစ်မှုရင်း ဟုတ်မဟုတ်၊ အရောင်းအဝယ်စာချုပ် စစ်မစစ် ဆိုတာကို သက်ဆိုင်ရာဌာနမှာ သွားစစ်ရပါမယ်၊ တချို့ကတော့ မြေကိစ္စကို နားမလည်တော့ ပါမစ်အစစ်မှန်း အတုမှန်း မသိရာက ဖြစ်လာကြတာ’လို့ ကောင်းကောင်း(၂) အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်မှ ဦးအောင်မိုးကျော်က ပြောပါတယ်။
ဒါကြောင့် မြေကွက်ဝယ်ယူတဲ့အခါ ပါမစ်မြေလား၊ ဂရန်မြေလားဆိုတာကို သေချာသိဖို့လိုအပ်သလို စရန်မရိုက်ခင်ရုံးမှာ သွားစစ်သင့်ပါတယ်။ မှန်တယ်ဆိုမှ စရန်ရိုက်ရမှာဖြစ်ပြီး နာမည်ပေါက် သေချာပြီဆိုရင်တော့ ငွေအကျေချေသင့်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
----ထီယု (ဥပဒေအတိုင်ပင်ခံ) —
''မြေကွက်ဝယ်ဖို့ သွားကြည့် ပြီး ပြန်လာတာ''ဟု မိတ်ဆွေတစ် ဦးက စာရေးသူ၏ ရုံးခန်းသို့ ဝင် လာစဉ် ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
''ဘာတွေမြင်တွေ့ခဲ့ပြီး၊ ဘယ် လို ဖြစ်လာလဲ''ဟု စာရေးသူက မိတ်ဆွေ၏ အမူအရာကိုကြည့်၍ မေးလိုက်ပါသည်။
''မြေကွက်က ရှင်းထားတော့ ကြည့်ရတာ အဆင်ပြေပါတယ်။ သူတို့ ပြောစကားအရတော့ ပါမစ် မြေကွက်လို့ ပြောတယ်''
''ပါမစ်မြေကွက် ဖြစ်ကြောင်း အထောက်အထားခိုင်လုံရင်တော့ ဝယ်သင့်ပါတယ်''
''အဲဒီတော့ အခုရောင်းမယ် ဆိုတဲ့ သူအမည်နဲ့ ပါမစ်ရထားတဲ့ မြေကွက်လား''
''မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ ဘယ်လို ဖြစ်နေလို့လဲ''
''အခုရောင်းမယ်ဆိုတဲ့ သူက ဝယ်ထားတဲ့ ကတိစာချုပ်တော့ရှိ တယ်''
''အေး အရပ်စာချုပ်ဆိုတဲ့ စကားမကြာခဏကြားနေရတယ်။ အဲဒီအရပ်စာချုပ်ဆိုတာက၊ ဘယ်လိုစာချုပ်မျိုးကိုခေါ်တာလဲ၊ ရှင်း ပြပေးပါဦး''
''ပစ္စည်းလွှဲပြောင်းခြင်း ဥပဒေ နဲ့ စာချုပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင် ဥပဒေတို့အရ မရွှေ့မပြောင်းနိုင် သော ပစ္စည်းများဖြစ်တဲ့ အိမ် မြေ စသည်တို့ကို ရောင်းချသည့်အခါ မှတ်ပုံတင် အရောင်းအဝယ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုမှ တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်’'
''မှတ်ပုံတင် အရောင်း စာ ချုပ် ချုပ်ရင် အမြတ်ခွန်ဆောင်ရ တယ်ဆို ဟုတ်လား’'
''ဥပဒေနဲ့အညီ တရားဝင် အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင် တော့ ပထမဆုံး ဝယ်ယူမယ့်မြေ၊ အဆောက်အအုံတို့ကို တန်ဖိုးဖြတ် ဖို့ ပစ္စည်းတန်ဖိုးဖြတ်အဖွဲ့ထံ တင် ပြရတယ်။ တန်ဖိုးသတ်မှတ်ချက်အပေါ် မူတည်ပြီး ဝင်ငွေရလမ်း ပေါ်မှာ အခြေတည်လို့ ဝယ်ခွန် ဆောင်ရတယ်။ ပြီးမှ အရောင်းအဝယ် မှတ်ပုံတင် စာချုပ်ကို စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ရုံးမှာ ချုပ်ဆိုကြ ရတယ်။ အချို့က လည်း ပြန် ရောင်းမယ်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ မှတ်ပုံတင် အရောင်းအဝယ် စာချုပ် မချုပ်ဆိုကြတာလည်း ရှိ တယ်။ အချို့လည်း သူငယ်ချင်းယူဆသလို ဝယ်ခွန်မဆောင်နိုင်သေးလို့ဆိုပြီး မှတ်ပုံတင်အရောင်းအဝယ်စာချုပ် မချုပ်သေးတာလည်းရှိတယ်။ အဲဒီလို အခြေအနေမျိုးမှာ ရောင်းသူဝယ်သူတို့ရဲ့ တာဝန်များကို ဖော်ပြချုပ်ဆိုထားကြတဲ့ အိမ် မြေ အရောင်းအဝယ် ကတိ စာချုပ်များကို ချုပ်ဆိုထားတတ် ကြတယ်’’
''ကတိစာချုပ်ဆိုရင်တော့ မှတ် ပုံတင်ဖို့ မလိုဘူးပေါ့ ဟုတ်လား’’
''မှန်ပါတယ်။ ပစ္စည်းလက် ဝယ်ရရှိထားပေမယ့် ဥပဒေနဲ့အညီ တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်အတွက် ဆောင်ရွက်ပေးရမယ့်တာဝန်၊ ဝယ်ယူသူဘက်ကလည်း ပစ္စည်းတန်ဖိုးပးချေရမည့် အခြေအနေ၊ ဝယ်ခွန်ကိစ္စစသည်ဖြင့် တာဝန်များကို ဖော်ပြပြီး ကတိပြု စာချုပ် အဖြစ် ချုပ်ဆိုထားကြတာပဲဖြစ် တယ်။ ကတိစာချုပ်ကတော့ သူငယ်ချင်းပြောသလို မှတ်ပုံတင်ဖို့မလိုအပ်သေးဘူး။ အဲဒီလို ရောင်းသူ ဝယ်သူတို့ရဲ့ ကတိပြုဆောင် ရွက်ချက်တွေဖ်ာပြချုပ်ဆိုတဲ့ အရောင်းအဝယ် ကတိစာချုပ်မျိုး ကို အရပ်စာချုပ်လို့ ခေါ်ကြ တာ ဖြစ်တယ်။ လွတ်လွယ်မှတ်ထား မယ်ဆိုရင်တော့ စာချုပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင် ဥပဒေနဲ့အညီ မှတ်ပုံ တင်ထားခြင်းမရှိဘဲ ချုပ်ဆိုထားတဲ့ ကတိစာချုပ်များသည် အရပ်စာ ချုပ်များဖြစ်တယ်လို့ မှတ်သားထား ရမှာဖြစ်တယ်’'
''ပါမစ်မြေကွက်ဆိုရင် စာ ချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ရုံးမှာ မှတ်ပုံ တင်ခွင့် မရဘူးဆိုတာ ဟုတ်သလား’'
''ဂရန်မြေနဲ့ဘိုးဘွားပိုင်မြေ တို့ကို ဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ မဖြစ်မနေ မှတ်ပုံတင် အရောင်းအဝယ် စာချုပ်ပြုလုပ်မှ တရားဝင် အ ရောင်း အဝယ်မြောက်ပြီး ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကို ဥပဒေနဲ့အညီရပိုင်ခွင့်ရှိမှာ ဖြစ်တယ်။ ပါမစ်မြေကွက်တွေကို တော့ စာချုပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင်ဥပဒေအရ မှတ်ပုံတင်ရန်မလိုအပ်ပါဘူး။ အရောင်းအဝယ်ကတိစာချုပ်နဲ့ လွှဲပြောင်းရောင်းချကြပြီး ဂရန်လျှောက်ထားကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်''
''ပါမစ် အတုတွေလည်း ရှိ တယ်လို့ ကြားဖူးတယ်။ ဟုတ်ပါ သလား''
''အတုမရှိဘူးလို့တော့ မပြောလိုဘူး။ အဓိကအချက်ကတော့ ဝယ်မယ်ဆိုတဲ့ သူအနေနဲ့ စာရွက်စာတမ်းကို သေချာစုံစမ်းဖို့တော့ လိုတာပေါ့။ အခုသူငယ်ချင်းသွား ကြည့်တယ်ဆိုတဲ့ မြေကွက်ဘေး ပတ်ဝန်းကျင်က ဘယ်လိုအခြေအ နေရှိသလဲ''
''အချို့လည်း အိမ်ဆောက် ထားတာတွေ့ရတယ်။ မြေကွက် လပ်တွေလည်း အတော်များများ ရှိသေးတယ်''
''အခု ရောင်းမယ်ဆိုတဲ့ မြေကွက်က ကာရံထားတာရှိလား''
''ယာယီသဘောဝါးကပ်တွေ နဲ့ ကာထားတာတော့ တွေ့တယ်။ အုတ်တိုင်တွေ စိုက်ထားတာလည်းတွ့ခဲ့တယ်။ စာရွက်စာတမ်း မှန်မ မှန်ကို ဘယ်မှာသွားစစ်ဆေးရသလဲ’’
''ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင် သာယာရေးကော်မတီက ထုတ်ပေးထားတဲ့ မြေချပါမစ်နဲ့ မြို့ရွာနှင့် အိုးအိမ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနက ထုတ် ပေးတဲ့ မြေချပါမစ်နှစ်မျိုးရှိတယ်’’
''ဒါဆိုရင် သက်ဆိုင်ရာ ရုံး ဌာနတွေမှာ စုံစမ်းရမှာပေါ့''
''မှန်ပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာ ဌာနက ထုတ်ပေးထားတဲ့ မြေချပါ မစ်ဟာ စာရွက်စာတမ်းပြည့်စုံမှုရှိ မရှိ၊ ရောင်းသူနဲ့ အမည်ပေါက် မည်သို့ ဆက်စပ်မှုရှိ မရှိကတော့ သေချာမေးမြန်းဖို့လိုတယ်''
''စုံစမ်းလို့ရအောင်ဆိုပြီး မြေချပါမစ် စာရွက်စာတမ်းကို ဓာတ်ပုံမိတ္တူကူးပြီး ယူလာတယ်။ စုံမစုံကြည့်ပေးပါဦး''
''မိသားစု ဓာတ်ပုံများ လို အပ်နေသလားလုိ့'' စာရေးသူက စာရွက်စာတမ်းဓာတ်ပုံ မိတ္တူများကို ကြည့်၍ မေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
''သူတို့ပေးလိုက်တာတော့ ဒီ စာရွက်တွေအကုန်ပဲ''
(၁) ’’မြေချပါမစ်မှာ အိမ်ရာ ဆောက်လုပ်နေထိုင်ခွင့် လက်မှတ် (မြေပါမစ်)
(၂) မြေကွက် ဖော်ပြထားတဲ့ မြေကွက်အမှတ်နဲ့ အကျယ်အဝန်းပြမြေပုံ၊
(၃) ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင် မည့် သူများ၏ ရာဇဝင်အကျဉ်း ချုပ် စာရွက်နဲ့
(၄) မိသားစုဓာတ်ပုံတို့ ပါရှိရတယ်’'
''စာရွက်စာတမ်း လေးမျိုး ပေါ့’'
''ဟုတ်တယ်။ ဒီမှာက မိသားစုဓာတ်ပုံမပါလာတော့ စိစစ်ဖို့လိုလိမ့်မယ်။ ဒီမြေကွက်ကို စွပ်စွဲ ပြောတာတော့ မဟုတ်ဘူး။
တစ်ခါ တစ်ရံမှာ ပါမစ်မူရင်းပျောက်သွား လို့ အသစ်လျှောက်ထားကြတာလည်း ရှိတယ်။ မူရင်းကောက်ရသူက သူဝယ်ထားတဲ့ မြေကွက်ပါဆိုပြီး ပါမစ်စာရွက်မှာပါတဲ့မိသားစုဓာတ်ပုံကို ဖြုတ်ထားလို့ လက်လွှဲ ရောင်းချတာလည်းရှိတတ်တယ်။ ဒါကြောင့် မှားယွင်းမဝယ်မိစေဖို့ သက်ဆိုင်ရာရုံးဌာနမှာ စုံစမ်းစိစစ် ပြီးမှ ဝယ်သင့်တယ် သူငယ်ချင်း'' ဟု အကြံပြုဆွေးနွေးလိုက်ပါသည်။
ဖေဖော်ဝါရီလ၂ ရက်ထုတ်၊ ဈေးကွက်ဂျာနယ် အမှတ် ၉၉၉ တွင် ပါမစ်မြေကို ၀ယ်မည်ဆိုလျှင် ပါမစ် စာရွက်စာတမ်း၌ ပါရှိရမည့် အချက် အလက်များနှင့် ပူးတွဲပါစာရွက် စာတမ်းများအကြောင်းကို ဗဟုသုတ အဖြစ် ရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါသည်။
ယခုအခါ ပါမစ်မြေကိုပင် မြေခွဲ စိတ် ၀ယ်ယူသည့်အခါ တွေ့ကြုံရ သည့် မိတ်ဆွေတစ်ဦး၏ ဆွေးနွေးမှု ကို ဗဟုသုတအဖြစ် ဖော်ပြလိုက်ပါ သည်။
''ဟိုတလောက ပါမစ်မြေ၀ယ် မယ်ဆိုတာ ၀ယ်ဖြစ်သွားသလား''
စာရေးသူကပင် မိမိထံ ထပ်မံ ရောက်ရှိလာသော မိတ်ဆွေအားမေး လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
''စာရွက်စာတမ်း မပြည့်စုံတာနဲ့ မ၀ယ်ဖြစ်လိုက်ဘူး''
''အခု ကိစဿစက ဘယ်လိုဖြစ်လို့ လဲ''
''အခုလာရတဲ့ ကိစဿစက ပါမစ် မြေကွက်တစ်ကွက်ကို ၀ယ်ဖို့လာ ဆွေးနွေးတာပဲ။ ဒါပေမယ့် တစ်ကွက် လုံး မရောင်းဘူး။ မြေခွဲရောင်းမှာမို့ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိ မရှိ လာဆွေးနွေးတာ သူငယ်ချင်း''
''မြေကွက်ကတော့ ခွဲရောင်းလို့ ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပါမစ်မြေဖြစ် နေတော့ တရားဝင်ခွဲစိတ်လို့တော့ မရဘူး''
''ဒါဆို ရောင်းသူဝယ်သူနှစ်ဖက် သဘောတူတိုင်းတာပြီး ခွဲဝယ်ရမယ့် သဘောပေါ့''
''ဒီသဘောမျိုးဆိုပေမယ့် ခွဲဝေ ရောင်းချဝယ်ယူကြောင်း အရောင်း အ၀ယ်ကတိစာချုပ်တစ်ခုတော့ ချုပ် ဖို့လိုတယ်''
''ငွေပေးဝယ်တဲ့ ကိစဿစပဲ သေသေ ချာချာကို အရောင်းအ၀ယ် စာချုပ် ချုပ်ရမှာပေါ့ သူငယ်ချင်းရယ်''
''ကဲ ထားပါတော့၊ အခုဝယ်မယ် လို့ စိတ်ကူးထားတဲ့ ပါမစ်မြေရဲ့ အခြေအနေကို ပြောပြပါဦး''
''မြေချပါမစ်အမည်ပေါက်က တော့ ဖခင်ရဲ့ အမည်ပေါက်ဖြစ် တယ်။ မြေကွက်က ပေ ၄၀ _ ပေ ၆၀ မြေကွက်ဖြစ်တယ်။ မြေချပါမစ် နဲ့အတူ မြေပုံနဲ့ မိသားစုဓာတ်ပုံတွေ ပါရှိတာတွေ့ရတယ်''
''စာရွက်စာတမ်းကတော့ သူ ငယ်ချင်းရဲ့ ပြောစကားအရဆိုရင် ပြည့်စုံမှန်ကန်တဲ့ သဘောမှာရှိတယ်''
''အေး ခက်တာက အမည် ပေါက် ဖခင်နဲ့ မိခင်နှစ်ယောက်လုံး ကွယ်လွန်သွားကြပြီ''
''ကျန်တဲ့ သားသမီးက မြေကွက် ကို ခွဲရောင်းမယ်ပေါ့''
''သားသမီးနှစ်ယောက်ရှိတယ်။ တစ်ဦးစီက မြေကွက်ကို ခွဲပြီး အိမ် ဆောက်နေထိုင်ကြတယ်။ အခုရောင်း မယ်ဆိုသူက သားဖြစ်သူနေတဲ့ အပိုင်းကို ရောင်းမှာဖြစ်တယ်''
''ဒါဆိုရင် ခက်ခက်ခဲခဲမရှိပါ ဘူး''
''ခက်တာက ပါမစ်မူရင်းက အ ခြားဘက်ခြမ်းမှာ နေတဲ့ သူ့ညီမလက် ထဲမှာရှိတယ်။ သူ့လက်ထဲမှာ မိတဿတူ ဓာတ်ပုံမိတဿတူပဲရှိတယ်လို့ ပြောတယ်။ ဒါကြောင့် ၀ယ်ဖို့ အဆင်ပြေပါ့မလား သိချင်တာ''
''အခု ဆောက်ထားတဲ့ အိမ်နှစ် အိမ်က ခြံစည်းရိုးကာထားလား''
''အိမ်တစ်အိမ်နဲ့ တစ်အိမ်ကြား မှာတော့ ခြံစည်းရိုးကာထားတာ မရှိ ဘူး။ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူတိုင်း တာထားတဲ့ ပေ ၂၀ အကွာအဝေး အတိုင်း နယ်ကုန် အိမ်ဆောက်ထား တော့ အိမ်နှစ်အိမ်ကြားမှာ ခြံစည်းရိုး ကာထားတာ မရှိဘူးပေါ့''
''အင်းလေ ဒါကတော့ ပေ ၂၀ ပြည့် မပြည့် နှစ်ဖက်သဘောတူတိုင်း တာကြပြီး ခြံစည်းရိုးကာလို့ရပါတယ် လေ''
''ပါမစ်မြေကို ၀ယ်ရင် အ ရောင်းအ၀ယ်စာချုပ်ကို မှတ်ပုံတင် စာချုပ်စာတမ်းရုံးမှာ မှတ်ပုံတင်လို့ မရဘူးဆိုတော့ ပါမစ်မူရင်းလည်း မရှိဘူးဆိုရင် တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ခွင့် ရနိုင်ပါ့မလား''
''အမှန်တကယ် ၀ယ်မယ်ဆိုရင် တော့ အရောင်းအ၀ယ် ကတိစာချုပ် မှာ သေချာရေးသားဖော်ပြဖို့တော့လို မယ် သူငယ်ချင်း''
''ဂရန် လျှောက်ရင်တော့ တစ် ဖက်ခြမ်းမှာနေတဲ့ ညီမနဲ့တွဲပြီး လျှောက်ရမယ်ပြောတယ်''
''မှန်ပါတယ်။ တစ်ဖက်ခြမ်းမှာ နေတဲ့ ညီမနဲ့ ပေါင်းပြီး ဂရန်သစ် လျှောက်လို့ရတယ်။ အဲဒီလို ဆောင် ရွက်ပေးဖို့ ညီမဖြစ်သူက အရောင်း အ၀ယ်ကတိစာချုပ်မှာ အသိသက် သေအဖြစ် လက်မှတ်ထိုးဖို့လိုတယ်။ ဒါမှ သူနဲ့အတူပေါင်းပြီး ဂရန် လျှောက်လို့ရမှာဖြစ်တယ်''
''တကယ်လို့ ညီမဖြစ်သူက ဂရန်လျှောက်တဲ့အခါ ၀ယ်ထားသူကို အသိမပေးပဲ တစ်ခြံလုံးအတွက် ဂရန်လျှောက်ထားခဲ့ရင် ဘယ်လိုလုပ် မလဲ''
''ဒါလည်း မကြာခဏဖြစ်တတ် တဲ့ ကိစဿစပဲ။ ဂရန်လျှောက်ရင်တော့ သက်ဆိုင်ရာ မြို့တော်စည်ပင်သာ ယာက ကန့်ကွက်သူရှိ မရှိ သတင်းစာ မှာ ကြော်ငြာလေ့ရှိတယ်''
''တကယ်လို့ မကြည့်မိဘဲ ကျော် သွားခဲ့ရင် ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်သလဲ၊ ကန့် ကွက်သူမရှိဆိုပြီး သူတစ်ဦးတည်း အ မည်နဲ့ ဂရန် ရသွားနိုင်တာပေါ့''
''ဒါမျိုးလည်း မဖြစ်ဘူးလို့တော့ အတိအကျမပြောနိုင်ဘူး။ တစ်ခုရှိ တာက ဂရန်လျှောက်ထားမယ်ဆိုရင် တော့ သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်ကောင် စီမှာ နေထိုင်ကြောင်း ထောက်ခံချက် အပါအ၀င် လက်ရှိ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူ ဖြစ်ကြောင်းစတဲ့ လိုအပ်သမျှ ထောက်ခံချက်ရယူတယ်။ စာရွက် စာတမ်း ပြည့်စုံမှ ဂရန်လျှောက်လို့ရ တာ ဖြစ်တယ်''
''ဒါဆိုရင် အရောင်းအ၀ယ် ကတိစာချုပ်မှာ သက်ဆိုင်ရာ ရပ် ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနဲ့ ရာအိမ်မှူးတို့ က အသိသက်သေအဖြစ် လက်မှတ် ရေးထိုးကြမယ်ဆိုရင် အသိပေးပြီး သား ဖြစ်သွားနိုင်တာပေါ့''
''မှန်ပါတယ်၊ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ် ရေးမှူးထံမှာ ချုပ်ဆိုရင် အကောင်း ဆုံးပေါ့။ အဓိကအချက်က အရောင်း အ၀ယ်ကတိစာချုပ်မှာ ဂရန်လျှောက် ထားရင် တစ်ဖက်ခြမ်းမှာ နေသူနဲ့ ပူးတွဲဂရန်လျှောက်ခွင့်ရအောင် ရောင်းသူက တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက် ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းဆိုတဲ့ အချက် ဖော်ပြပါရှိရမှာဖြစ်တယ်''
''ဒါဆိုရင် တစ်ဖက်သတ် ဂရန် လျှောက်ထားလို့ မရနိုင်ဘူးပေါ့''
''တကယ်လို့ တစ်ဖက်သတ် ဂရန်လျှောက်ထားလို့ ရသွားရင် လည်း မိမိအနေနဲ့ ရောင်းသူကို ကတိ ပဋိညာဉ်အတိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးစေ လိုမှုဖြင့် တရားရုံးမှာ တရားစွဲပြီး အခွင့်အရေးတောင်းဆိုခွင့် ရှိမှာဖြစ် တယ်’'
''သူငယ်ချင်းပြောသလို ဂရန်ကို နှစ်ဦးပေါင်းလျှောက်မယ်ဆိုရင် ပူးတွဲ အမည်ပေါက်ဖြစ်နေမှာလား’'
''ဒါကတော့ လွယ်ပါတယ်။ ပူးတွဲအမည်ပေါက်ထွက်လာရင် မိမိ တို့မနေကြတဲ့ မြေကွက်တစ်ခြမ်းစီကို အပြန်အလှန် စွန့်လွှတ်ကြောင်း စာချုပ် စာတမ်းရုံးမှာ မှတ်ပုံတင် စာ ချုပ် ပြုလုပ်မယ်။ အဲဒီစွန့်လွှတ်စာချုပ်ကို မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီရဲ့ သက်ဆိုင်ရာ ဌာနထံ တင်ပြပြီး မြေကွက်ခွဲစိတ်ပေးရန် (ဂရန်ခွဲ) လျှောက်ထားရင် မိမိအမည် ပေါက် ဂရန်သစ် ရရှိမှာဖြစ်တယ် သူငယ်ချင်း''ဟု ရှင်းပြဆွေးနွေးလိုက် ပါသည်။
အိမ်မြေ၀ယ်လျှင်အထူး သတိပြုရမည့် စာရွက်စာတမ်း အတုများ
တစ်နေ့က နေ့စဉ်ထုတ် သတင်းစာတစ်စောင်ထဲမှာ တရားမဝင် မြေရောင်း မြေဝယ်တွေ ပေါ် ပေါက်နေတယ်လို့ ဖတ်လိုက်ရ တယ်'' ဟု မိတ်ဆွေတစ်ဦးက စတင် ဆွေးနွေးလာပါသည်။
''ဟုတ်တယ်။ ရန်ကုန်၊ မန္တလေးလို မြို့ကြီးတွေမှာ မြို့ပြ လူဦးရေထူထပ်လာကြတော့ မြို့ပြ ဆင်ခြေဖုံး နေရာတွေကို တရား မဝင် ကျူးကျော်နေထိုင်သူတွေများ လာကြတယ်။ တချို့နေရာဆိုရင် ရွာကြီးတစ်ရွာအခြေအနေမျိုး ရောက်နေကြတယ်''
''နိုင်ငံတော်အစိုးရက တော့ မြို့ပြစီမံကိန်းတွေ လုပ်ပေး နေတယ် မဟုတ်လား''
''အဲဒီမြို့ပြစီမံကိန်းနဲ့ နီးတယ်ဆိုပြီး အကြောင်းပြချက်နဲ့ အားနည်းချက်ကိုရယူပြီး အ ရောင်းအဝယ်တရားမဝင်လုပ်နေကြ တာပဲ။ အခု ဆိုရင် နိုင်ငံတော်က ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့ ဆင်းရဲနွမ်းပါး လျှော့ချရေးကို အလေးထားတဲ့ အနေနဲ့ ကျေးရွာ မြေငှား ဂရန် ထုတ်ပေးနိုင်ရေးအထူး လုပ်ငန်းအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းလို့ မြေငှား ဂရန်တွေ ထုတ်ပေးနေတယ်လေ''
''မြေခွန်ပြေစာအတုတွေ ပေါ်နေဆိုလားပဲ''ဟု မိတ်ဆွေက ပြောပြန်သည်။
''အတုကတော့ မြေခွန်ပြေ စာတစ်ခုတည်း မဟုတ်ဘူး။ မြေချ ပါမစ်အတု၊ မြေဂရန်အတုတွေ လည်းရှိတာပဲ''
''အဲဒါ ဘယ်လိုခွဲခြားမလဲ ဆိုတော့ ငွေစက္ကူလို အတုအစစ် ခွဲခြားလို့ရတဲ့ စာရွက်နမူနာပုံစံ တော့ မရှိဘူးပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဒီမြေ ကွက်ပြေစာကို ထုတ်ပေးတယ်ဆို တဲ့ သက်ဆိုင်ရာရုံးဌာနကို မေး မြန်းစုံစမ်းလို့ရတယ်''
''မြေကိုဝယ်မယ်ဆိုရင် မြေစာရင်း ဦးစီးဌာနကို စုံစမ်းရ မယ်ပေါ့ ဟုတ်လား''
''ကျေးရွာနဲ့မြို့ပြဆင်ခြေ ဖုံးနေရာတွေမှာတော့ နီးစပ်ရာ မြေ စာရင်းဦးစီးဌာနမှာ စုံစမ်းလို့ရ တယ်။ မြို့ရွာနှင့် အိုးအိမ်ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာန ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင် သာယာရေး ကော်မတီစတဲ့ တရား ဝင်ဌာနဆိုင်ရာတွေမှာ သွား ရောက်စုံစမ်းပြီး ခိုင်မာတယ်ဆိုမှ ဝယ်သင့်တယ်''
''ဒါဆိုရင် သက်ဆိုင်ရာ ဌာနက အတုအစစ်ခွဲခြားပေး တယ်ပေါ့''
''ဒီသဘောပေါ့လေ၊ တင် ပြတဲ့ မြေကွက်ပြေစာ၊ မြေကွက်ရဲ့ မြေချပါမစ်၊ မြေဂရန်တွေဟာ သက်ဆိုင်ရာဌာနက ထုတ်ပေးခဲ့ ခြင်းရှိ မရှိ၊ စိစစ်ပေးတယ်''
''သက်ဆိုင်ရာဌာနက ထုတ်ပေးတဲ့ စာရွက်စာတမ်း မ ဟုတ်ရင် လက်ဝယ်ရှိသူမှာ အပြစ် ရှိသလား''
''မှန်ကန်တဲ့ စာရွက်စာတမ်း မဟုတ်မှန်းသိလျက်နဲ့ မြေကွက်ကို အကြောင်းပြရောင်းမယ်ဆိုရင် အပြစ်ရှိသွားမှာပေါ့။ လွန်ခဲ့တဲ့ ငါးနှစ်လောက်က ဖြစ်မယ် ထင်တယ်။ မိတ်ဆွေတစ်ဦးက ရန်ကုန်မြို့ပြ ဆင်ခြေဖုံးမြို့နယ်တစ်ခု မှ မြေဂရန်ရှိပြီး မြေကွက်တစ် ကွက် ကို ဝယ်လိုက်တယ်။ နောက်မှာ မြေကွက်သွားကြည့်တော့ အ ခြားလူတွေနေကြတာကို တွေ့ရတယ်။ ဒါနဲ့ မြို့ရွာနှင့် အိုးအိမ် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနသို့ သွားပြီးစုံစမ်း တော့ ဒီမြေဂရန်ဟာ မြို့ရွာနှင့် အိုး အိမ်ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနက ထုတ် ပေးထားတဲ့ မြေဂရန် စာချုပ် မဟုတ် ဘူးလို့ ပြန်ကြားစာရခဲ့ တယ်။ ဒီမှာပဲ သူ့ကို လိမ်လည် ရောင်းချတယ်ဆိုပြီး တရားစွဲလို့ ရောင်းချသူတွေ ထောင်ဒဏ်ကျခံ ခဲ့ရတယ်။ ဒါကြောင့် သိလျက်နဲ့ ရောင်းရင်တော့ အပြစ်ရှိမှာဖြစ် တယ်''
''လိမ်လည်ရောင်းသွားတဲ့ သူကို ရှာမတွေ့ရင် ဘယ်လိုလုပ် မလဲ''
''လိမ်လည်ရောင်းသွားတဲ့ သူကို ရှာမတွေ့ရင်တော့ ဝယ်သူ က အဆုံးရှုံးခံရမှာပေါ့''
''မြေချပါမစ် နှစ်ခုထပ်နေ မယ်၊ မြေဂရန်နှစ်ခုထပ်နေရင် သက်ဆိုင်ရာဌာနက ဘယ်သူ့ကို တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုမလဲ''
''ဒါလည်းမကြာခဏဖြစ်တတ်တဲ့ ကိစ္စပဲ။ မြေချပါမစ်နှစ်ခု၊ မြေဂရန်နှစ်ခုထပ်နေမယ်ဆိုရင် သက်ဆိုင်ရာ ဌာနက စိစစ်ပြီး အမှန် တကယ်ထုတ်ပေးထားတဲ့ စာရွက်စာတမ်းကို အတည်ပြု ကြောင်းနဲ့ မမှန်မကန်ရယူထားတဲ့ စာရွက်စာတမ်းကို ပယ်ဖျက် ကြောင်း ကြေညာ မှတ်တမ်းတင် ပေးမှာဖြစ်တယ်''
''ဒီလိုဆိုတော့လည်း မြေ မဝယ်မီမှာ သေချာစုံစမ်းသင့် တယ်''
''ဟုတ်တယ်၊ ဒါနဲ့ပတ် သက်လို့ ဗဟုသုတအဖြစ် ပြောရ ရင် နေ့စဉ်ထုတ် သတင်းစာ တစ် စောင်မှာ မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့် မြေစီ မံခန့်ခွဲမှုဌာန ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီက အများသိစေရန် ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ပေးတာမျိုးရှိတယ်''
မြို့နယ် မြေတိုင်းရပ်ကွက် အမှတ် (x)၊ မြေကွက်အမှတ် (xx) အား ဦး...အမည်ပေါက်မြေချ ပါမစ် တင်ပြပြီး၊ ဦး...မှ အမှုတွဲ အမှတ် (x)ဖြင့် ဂရန် လျှောက် ထားရာ မြေငှားစာချုပ်အမှတ် ဖြင့် (xxx)နေ့တွင် ¤င်းအမည်ပေါက် မြေငှား စာချုပ် (ဂရန်) ထုတ်ယူ သွားပြီးဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါ မြေကွက်ကိုပင် ပါမစ်အမည်ပေါက်ဦး ...ထဲမှ ဝယ်ယူထားသူ ဒေါ်... မှ ပါမစ်မူရင်း တင်ပြ၍ ဂရန်သစ် လျှောက် ထားလာ သည်။
မြေကွက်တစ်ကွက်တည်း ကိုမြေချပါမစ် နှစ်စောင်ထွက်နေ သဖြင့် မြို့ပြနှင့် အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနသို့ အတည်ပြုမေးမြန်းခဲ့ ရာ မြို့ပြနှင့် အိမ်ရာ ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနမှ ပထမ ဦး...တင်ပြ သော မြေချပါမစ်မှာ ၄င်းဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပေးထားသော ပါမစ်မ ဟုတ်ကြောင်း ပြန်ကြားလာသဖြင့် ဦး...ထံသို့ ထုတ်ယူသွားသော မြေငှား စာချုပ်မူရင်းအား ဌာနသို့ ပြန်လည်အပ်နှံရန် သုံးကြိမ်တိုင် တိုင် အကြောင်းကြားပြီးဖြစ်သော် လည်း ဌာနသို့ လာရောက်အပ်နှံ ခြင်းမရှိပါသဖြင့် မြေဂရန် လျှောက်ထား ရယူသွားသော မြေ ငှားစာချုပ်အ မှတ် (x) ဦး ... အမည်ပေါက်မြေငှားစာချုပ် ဂရန်စာအုပ်အား မြို့မြေစာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ပြီးကြောင်း အသိပေး ကြော်ငြာ အပ်ပါသည်'' လို့ ဖော် ပြ ကြော်ငြာပေးပါတယ်''
''ဒါဆို အဝယ်မမှားအောင် သေချာစိစစ်ဖို့လိုပြီပေါ့''
''မှန်တယ် သူငယ်ချင်း၊ ခိုင်မာတဲ့ အထောက်အထားဟုတ် မဟုတ်သေချာစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးမှ ဝယ်သင့်တယ်။ ဒါမှမဟုတ်ရင် ဆုံးရှုံးမှု များနဲ့ ရင်ဆိုင်နိုင်ပြီး မလို လားအပ်တဲ့ ပြဿနာတွေဖြစ်ပေါ် လာနိုင်လို့ မြေနဲ့ အိမ်ကိုဝယ်ရင် အထူးသတိပြုသင့်တယ် သူငယ် ချင်း''
ရောင်းမှားဝယ်မှား မဖြစ်ရအောင် မြေအမျိုးအစားအလိုက်စာရွက်စာတမ်း စစ်ဆေးသင့်
အိမ်ခြံမြေဈေး ကွက်အတွင်းမှာ မြေ၊ တိုက်ခန်းရောင်းဝယ်မှုတွေမှာ ရောင်းမှား ဝယ်မှားမဖြစ်ပေါ်စေဖို့ မြေအမျိုးအစားအလိုက် စစ်ဆေးရမယ့် စာရွက် စာတမ်းတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ အိမ်ခြံမြေ၊တိုက်ခန်း ဝယ်ယူမယ်ဆို ရင် အိမ်ခြံမြေ၊ တိုက်ခန်းအမျိုးအစား အ လိုက် လိုအပ်တဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေက အပြည့်အဝ မတူညီနိုင်ပါဘူး။
ဒါကြောင့် အိမ်ခြံမြေ၊ တိုက်ခန်း ဝယ်ယူတဲ့အခါ ပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထား စာရွက်စာတမ်း အပြည့်အစုံကို တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အိမ်ခြံမြေဝယ်ယူသူတွေ အနေနဲ့ လိုအပ်တဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေကို သိရှိထားဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
- ဂရန်မြေဝယ်မယ်ဆိုရင် ဂရန်အမည် ပေါက် "မှန် မမှန်၊ စစ် မစစ်" ကို သက်ဆိုင်ရာ ရုံးမှာ သွားရောက် စစ်ဆေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂရန်မြေနဲ့ ပတ်သက်လို့ စစ်ဆေးရမယ့် စာရွက်စာ တမ်းက နည်းပါတယ်။ ဂရန်အမည်ပေါက် မှန် မမှန်ကိုသာ ရုံးမှာ သွားရောက် စစ်ဆေးဖို့ပဲ လိုအပ်ပါတယ်။
ပါမစ်မြေဆိုတာကတော့ မြို့သစ်ဘက်တွေမှာ ချထားပေးတဲ့မြေ အမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်။ ပါမစ်မြေကို ဝယ်ယူမယ် ဆိုရင်
ချထားပေးတဲ့ပါမစ် မှန် မမှန်၊ အဆို ပါ ပါမစ်ကို အင်ထရီပြင်ထားဖို့ လိုအပ်ပါ တယ်။ အင်ထရီဆိုတာက မြေနေရာ အ ကွက် ချ ပြီး ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ပါမစ်ကို ပြန် လည် စစ်ဆေးပြီး နေထိုင်ခွင့်ပြုတဲ့အမှတ် တံဆိပ် ဖြစ်ပါတယ်။ အင်ထရီဝင်ပြီးသား ပါမစ်ဆိုရင် နောက်ကျောဘက်မှာ လေးထောင့် တံဆိပ်တုံးလေးနဲ့ ပြန်လည်စိစစ် ပြီးဖြစ်ကြောင်း ပါရှိရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အင် ထရီ မဝင်ရသေးတဲ့ မြေကွက်တွေက ဈေး ကွက်အတွင်းမှာ ဈေးနှုန်းကွဲလွဲမှုရှိတယ် လို့ သိရတယ်။ “ဈေးနှုန်းမကွာဘူးဆိုရင်တောင် ရာ တန်အကွက်တွေမှာ ဈေး ငါးသိန်း၊ ၁၀ သိန်း ကွာတယ်၊ ထောင်တန် အကွက်တွေ မှာဆိုရင် အင်ထရီမဝင်ရသေးလို့ ပွဲပျက် တာတွေတောင် ရှိတယ်”လို့ မြန်မာ့ရတနာ မြေ အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်မှ အမ်ဒီ ကို ဝင်းနိုင်ဦးက ဆိုပါတယ်။ ပါမစ်မြေမှာ စာရွက်စာတမ်းလည်း မှန်ကန်မှုရှိပြီး အင်ထရီလည်း ဝင်ထားမယ်ဆိုရင် အမည်ပေါက်ပိုင်ရှင်ရဲ့ မှတ်ပုံ တင် မိတ္တူ၊ သန်းခေါင်စာရင်းမိတ္တူ ပါရှိရပါမယ်။ အဆိုပါ မိတ္တူတွေကိုလည်း မူရင်းနဲ့ တိုက်ဆိုင် စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။
လယ်မြေ ဝယ်ယူမယ်ဆိုရင်တော့ လယ်မြေအတွက် အစိုးရကို အခွန်ပေးထားတဲ့ စလစ်၊ လယ်ယာမြေမှတ်ပုံတင် စာအုပ်၊ ပုံစံ(၇)၊ စလစ် up to date ဖြစ် မဖြစ် စစ် ဆေးရပါမယ်။ စလစ် up to date ဆိုတာကတော့ အစိုးရကို အခွန်ငွေပေးသွင်းထား တဲ့နှစ်က အနီးဆုံးနှစ် ဖြစ်ရပါမယ်။ လယ်ယာမြေမှာ ပိုင်ဆိုင်မှု စာရွက်စာ တမ်းဆိုတာ "လယ်ယာမြေ လက်ဝယ်ရှိသူတိုင်း" ရဲ့လက်ထဲမှာ မရှိနိုင်ပါဘူး။ လယ်ယာမြေကို စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်တဲ့အပေါ် အခွန် စည်းကြပ်ခံထားရတဲ့ မြေခွန် ပြေစာ နှင့် ပုံစံ(၇) သည်သာ ပိုင်ဆိုင်မှု ဖြစ်ပါတယ်။
တချို့လယ်ယာမြေတွေက အခွန်ပြေစာအပြင် မြေစာရင်းပုံစံ ၁၀၅ ကိုလည်း ရေးကူးရယူထားရှိနိုင်ပါတယ်။ မြေစာရင်းပုံစံ ၁၀၅ ဆိုတာက မြေစာရင်းဌာနက မှတ် ပုံတင်စာရင်း၊ မြေပုံ စသည်တို့မှာ မှတ်သား ထားတဲ့အတိုင်း မှတ်တမ်းထိန်းသိမ်းတဲ့ မြေစာရင်းဌာန က ပုံစံတူရေးကူးပေးတဲ့ ပုံစံ တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
မြေစာရင်းပုံစံ ၁၀၅ မှာ မြေကွက်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို တစုတစည်း သိရှိနိုင်ပါတယ်။ ပုံစံ ၁၀၅ မှာ ဖော်ပြချက်အရ မြေကွက်တည်ရှိ တဲ့ မြို့၊ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာ၊ ကွင်း၊ ဧရိယာ၊ မြေအမျိုးအစား စတာတွေကို အလွယ်တကူ သိရှိနိုင်ပါတယ်။ “လယ်ယာမြေကို စလစ်တစ်ခုတည်းနဲ့ အရောင်းအဝယ်လုပ်တာတွေ ရှိတယ်၊ အဲ ဒါတွေက ရေရှည်မှာ အဆင်မပြေပါဘူး”လို့ ကိုဝင်းနိုင်ဦးက ဆိုပါတယ်။ ပုံစံ(၇) ကျထားပြီးသောလယ်ယာမြေတွေက ပိုင်ဆိုင်မူ ခိုင်မာတယ်လို.ဆိုပါတယ်။ အရှုပ်အရှင်းရှိတဲ့ လယ်မြေ၊ လယ်ယာမြေ နဲ. ပိုင်ဆိုင်မှုအငြင်းပွားနေတဲ့နေရာတွေကလယ်မြေ၊ ယာမြေတွေကို ပုံစံ(၇) မချပေးဘူးလို.သိရပါတယ်။ ဒါကြောင့် လယ်မြေ၊ လယ်ယာမြေဝယ်မည်ဆိုပါက ပုံစံ(၇) ရှိမရှိကို အရင်စုံစမ်းသင့်ပါတယ်။
"လန ၃၉ မြေ"
လန ၃၉ ဆိုတာက လယ်ယာမြေမှ တစ်ဆင့် အခြားမြေအဖြစ် ပြောင်းလဲ အ သုံးပြုခွင့် ပြုထားတဲ့ မြေအမျိုးအစားဖြစ်ပါ တယ်။ လန ၃၉ မြေ ဝယ်ယူမယ်ဆိုရင် လယ်ယာမြေကနေ အခြားမြေ ပြောင်းလဲ အသုံးပြုခွင့်ပြုထားတဲ့ လန ၃၉ စာရွက် ရှိ ရပါမယ်။ ဒါမှသာ လယ်ယာမြေကို အိမ် ယာမြေ၊ စက်မှုထုတ်ကုန် တစ်ခုခု ပြောင်း လဲ အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် လန ၃၉ ချထား ပေးတဲ့ စာရွက်ရှိမှ အဆင်ပြေမှာ ဖြစ်ပါ တယ်။
တိုက်ခန်း အရောင်းအဝယ် ပြုလုပ်တဲ့ အခါမှာ ဆက်စပ်စာချုပ်တစ်ခုရှိရုံ နဲ့ ပိုင် ဆိုင်မှု အထောက်အထား ပြည့်စုံပြီလို့ မထင်မှတ်သင့်ပါဘူး။ တိုက်ခန်းအရောင်း အဝယ်ပြုလုပ်တဲ့နေရာ မှာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေကတော့ ဆက်စပ် စာချုပ်၊ BCC (လူနေထိုင်ခွင့်) ၊ မြေ ရှင်လက်မှတ်၊ ရေမီတာ၊ မီးမီတာ စာရွက်စာတမ်းတွေ လို အပ်ပါတယ်။ အဲသည် စာရွက်စာတမ်းတွေ ပါရှိရင်တော့ ပိုင်ဆိုင်မှု သေချာနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ယခုခေတ်သည် မြေကွက်အရောင်းအ၀ယ်တွင်ကျယ်သော ကာလဖြစ်ပြီး ငွေပိုငွေလျှံ ရှိသူများအဖို့ မြေကွက် ၀ယ်ရောင်းခြင်းမှာ စီးပွားရေးတစ်ရပ်သဖွယ် ဖြစ်လာပါသည်။ အများဆုံး အရောင်း အ၀ယ်ဖြစ်သည့် မြေကွက်များမှာ ပါမစ်မြေ၊ ဂရန်မြေများ ဖြစ်ကြပါသည်။ ဂရန်မြေအား ၀ယ်ယူရာတွင် မိမိ အမည်ပေါက်ဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုသည့်တိုင် စာချုပ်အား ခိုင်မာစွာ ချုပ်ဆို၍ အထူး ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ (SP) အား ယူထားလေ့ ရှိပါသည်။
သို့ရာတွင် ပါမစ်မြေအား ယင်းသို့ အထူးကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ (SP) ရယူ၍ ၀ယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ။ အမည်ပေါက်ဖြစ်သူထံ အထွေထွေကိုယ်စားလှယ်စာ (GP) အားလည်း တော်ရုံဖြင့် လွှဲအပ်ပေး လေ့မရှိကြပါ။ ၀ယ်ရောင်းပြုသူများအနေဖြင့် အဆိုပါမြေတွင် အဆောက်အဦ ဆောက်လုပ်နေထိုင်ရန် အစီအစဉ်မရှိသူများဖြစ်၍ အဆိုပါမြေနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြဿနာသော်လည်းကောင်း၊ အခြားနည်း ဆောက်ရွက်ခြင်းများသော်လည်းကောင်း တစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ ပြုလုပ်ထားခြင်း ရှိမရှိအား အစဉ်တစိုက် နားဖွင့်ရမည့် အနေအထားဖြစ်ပေါ်နေရပါသည်။
သို့ဖြစ်၍ ပါမစ်မြေအား ၀ယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသူများအနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ ရုံးဌာနများတွင် ကြိုတင်ကန့်ကွက်တင်ပြမှုလေး ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် မလိုလားအပ်သည့် ပြဿနာရပ်များအား သိရှိ၍ ကာကွယ်ခုခံမှုများ ပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေး လိုက်ပါရစေ။
နောက်ဝယ်လက်သို့ ပြန်လည်ရောင်းချသည့်အခါတွင် ယင်းသို့ ကြိုတင်ကန့်ကွက်မှုအား ပြန်လည်ရုတ်သိမ်းပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်လို့ ထပ်မံအကြောင်းကြားအပ်ပါသည်ရှင်။
Source : မသီတာဟန်
"ပါမစ်မြေ ၀ယ်ယူခြင်းဆိုင်ရာ သိမှတ်ဖွယ်ရာ"
ပါမစ်မြေကွက်ကို ဝယ် လျှင် တရားဝင်ဆိုင်ခွင့်ရပါသ လား။ မှတ်ပုံတင်အရောင်းအဝယ် စာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်ပါသလားဟု မေးလာသဖြင့် ဤဆောင်းပါးကိုဗဟုသုတအဖြစ် ရေးသားလိုက်ပါ သည်။
ပါမစ်မြေအကြောင်း မတင်ပြမီ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ဥပဒေအရ သတ်မှတ် ထားသောမြေအမျိုးအစားများကို သိထား ရန် လိုအပ်ပါသည်။
ဥပဒေနှင့်အညီ သတ်မှတ် ထားသည့် မြေအမျိုးအစားများမှာ-
၁။ ဘိုးဘွားပိုင်မြေ (မြေပိုင်မြေ)
၇။ အခွန်လွတ်သာသနာ့ ဂရန်မြေ
၁ဝ။ စနစ်တကျ ကျူးလွန်ခြင်းမြေ ဟု သတ်မှတ်ခွဲခြားထားပေသည်။
အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ပါမစ်မြေဆိုသည်မှာ စည်ပင်ပြန့်ပြောမှုမရှိသေးသည့် နေရာများတွင်စည်းကမ်းချက်ဖြင့် သုံးစွဲခွင့်ပြုထားသည့် ''အိမ်ရာ ဆောက်လုပ်နေထိုင်ခွင့်''ချပေး ထားသောမြေအမျိုးအစားဖြစ်သည်ဟု အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားပါသည်။
ထို့ကြောင့် ဘိုးဘွားပိုင်မြေ၊ မြေငှားဂရန်မြေများကဲ့သို့မြေပိုင်ဆိုင်မှုကို အခြေမတည်ဘဲ အိမ်ရာဆောက်လုပ်နထိုင်ခွင့်အတွက် ချပေးထားသော မြေအမျိုးအစားဖြစ်သည်။
မြေချပါမစ် (အိမ်ရာ ဆောက်လုပ်နေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်)တွင်အိမ်ရာမြေကွက်ရသူသည် မြေကွက်ကို ခွဲစိတ်ခြင်း၊တစ်ဆင့် လွှဲပြောင်း ရောင်း ချ၊ ပေါင်နှံ၊ ပေး ကမ်းခြင်းလုံးဝမပြုရဟု ဖော်ပြ ထားပါသည်။
သို့ရာတွင် ငွေအရင်းအနှီး မြှုပ်နှံလိုသူများအနေဖြင့်ဂရန် မြေအဖြစ် အမည်ပေါက်သွားပါက မြေတန်ဖိုးအဆမတန်ကွာခြား သွားသဖြင့် ပါမစ်မြေများကိုသာသင့်တင့်ဈေးပေး၍အရောင်းအဝယ် ကတိစာချုပ်ချုပ်ဆိုကာ လွှဲ ပြောင်းရယူထားကြပေသည်။
- ထို့ နောက် မှ မြေငှားဂရန်ကို လျှောက် ထားရယူလေ့ရှိကြသည်။
ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီကမြေငှား စာချုပ်အသစ် (မြေငှားဂရန်) ထုတ်ပေးရန်နှင့်ပတ်သက်၍ အောက်ပါ အတိုင်း သတ်မှတ်ထား ပေသည်။
မြေငှားဂရန်ထုတ်ပေး သော မြေအမျိုးအစားများမှာလိုင်စင်မြေ၊ စကွာတာမြေနှင့် ပါမစ် မြေတို့ဖြစ်ကြောင်းသတ်မှတ်ထား ပေသည်။
ဂရန်မြေထုတ်ပေးရန်အ တွက် အောက်ပါအချက်များကိုပူး တွဲတင်ပြလျှောက်ထားရပေသည်။
၁။ လျှောက်ထားသူသည် နိုင်ငံသားဖြစ်ရပါမည်။
၂။ ပါမစ်မြေ (အိမ်ရာ ဆောက်လုပ်နေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်)
၃။ ပါမစ်မြေအမည်ပေါက် သို့မဟုတ် ဥပဒေနှင့်အညီဆက်ခံ သူမှ တရားရုံးတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သော ကျမ်းကျိန်လွှာ
၄။ လွှဲပြောင်းထားခြင်းဖြစ်ပါက ကတိစာချုပ်များ(ဥပမာ-အ ရောင်းအဝယ်၊ ပေးကမ်း၊ စွန့်လွှတ်၊ လှူဒါန်းစသော
၅။ အမှုအခင်းဖြစ်ခဲ့ပါက ပိုင် ဆိုင်ခွင့်နှင့် ပတ်သက်သည့်တရား ရုံး၏ အမိန့်ဒီကရီ။
၆။ အဆောက်အအုံရှိကြောင်း အထောက်အထားများပါရှိရပေသည်။
ထိုကြောင့် ဤနေရာတွင် ပါမစ်မြေများကို ကတိစာချုပ်များဖြင့်အရောင်းအဝယ် လွှဲပြောင်းခြင်းပြုနိုင်ကြောင်း ကို တွေ့ရှိရမည်
စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင် အက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၇တွင်တန် ဖိုး ငွေ ၁ဝဝ အထက်ရှိသော မရွှေ့ မပြောင်းနိုင်သည့်ပစ္စည်း အ ရောင်း စာချုပ်သည် မှတ်ပုံမတင်ကတရားမဝင်ကြောင်း ပြဋ္ဌာန်း ထားပေသည်။
(အိမ်ရာ ဆောက်လုပ်နေထိုင်ခွင့် လက်မှတ် မြေကွက်) သည်လွှဲပြောင်းရောင်း ချပိုင်ခွင့်မရှိသဖြင့်စာချုပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင်ရုံးက မှတ်ပုံတင် အ ရောင်းစာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုပေးခြင်း မရှိပေ။
ထို့ကြောင့်နှစ်ဘက် သဘောတူ အရောင်းအဝယ်ကတိစာချုပ်အဖြစ်သာ ချုပ်ဆိုကြပြီး မြေဂရန်သစ်များလျှောက်ထား လေ့ရှိပေသည်။
မြေဂရန် လျှောက်ထားရာတွင် အဆိုပါ မြေကွက်ပေါ်တွင်အဆောက်အဦး ဆောက်လုပ်ထား ပြီးဖြစ်ရန် လိုအပ်သဖြင့်အ ဆောက် အအုံ ဆောက်လုပ်ထား လေ့ရှိပေသည်။
* ထို့ကြောင့်အ ရောင်းအဝယ်ပြုရာတွင် ပါမစ်မြေ နှင့်
အဆောက်အအုံတွဲဖက် ရောင်းကြ သည်။
* ဤတွင် အ ဆောက်အအုံ ပိုင်ဆိုင်မှုအတွက် ပါမစ်မြေအမည်ပေါက်သူနှင့် ဝယ်သူတို့ အဆောက်အအုံ
အ ရောင်းအဝယ် မှတ်ပုံတင် စာချုပ် ချုပ်ဆိုနိုင်ပေသည်။
''ဦးလှရွှေနှင့် ဒေါ်အုံးမြင့် ၁၉၉၂ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ တရားစီရင်ထုံးစာမျက်နှာ ၁၃၇''တွင် -ဦးလှရွှေ က ဒေါ်အုံးမြင့်အပေါ် မြေနှင့် အိမ်အပေါ်ပိုင်ဆိုင်ကြောင်းမြွက်ဟ ကြေညာမှုစွဲဆိုရာ တိုင်းတရားရုံး တော်က ပယ်ချခဲ့သဖြင့်
တရားရုံး ချုပ်သို့ အယူခံဝင်လာခြင်းဖြစ်သည်။
အချင်းဖြစ်မြေသည် နိုင်ငံတော်ပိုင်မြေဖြစ်ပြီး နေထိုင်ခွင့်ချပေးထားချက်အရ နေ ထိုင်ခွင့်ရရှိနေကြပြီး တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်မှုအတွက် လွှဲပြောင်းခွင့် မရှိသော မြေဖြစ်ကြောင်းအငြင်း မထွက်ပေ။
ဦးလှရွှေက အချင်း ဖြစ်မြေကို ပိုင်ဆိုင်ကြောင်းအား အခြေပြု၍စွဲဆိုခြင်းဖြစ်ရာ မူလရုံး၏ သုံးသပ်သည့်အတိုင်း အစိုး ရ မြေကိုဦးလှရွှေက ပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရ နိုင်ပေ။
- အိမ်ကိုရောင်းချသော အိမ် အရောင်းအဝယ် စာချုပ်တွင်တန် ဖိုးငွေ ကျပ် ၃ဝဝဝ ဖြင့် အရောင်း အဝယ်ပြုကြောင်း
- တန်ဖိုးငွေကျပ် ၁ဝဝ ကျော်သဖြင့် ပစ္စည်းလွှဲပြောင်းရေးအက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၄နှင့် စာချုပ် စာတမ်းမှတ်ပုံတင်အက်ဥပဒေ
ပုဒ်မ၁၇ တို့နှင့်အညီ မှတ်ပုံတင်ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းမရှိသဖြင့်အထမြောက် သော အရောင်းအဝယ်လည်းမ ဟုတ်ပေ။
အဆိုပါ ဥပဒေများတွင် နေခွင့် လက်မှတ်အရနေထိုင်သောမြေပေါ်ရှိ အဆောက်အအုံနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မှတ်ပုံတင်ရန်မလိုဟု
ထိုကြောင့်မူလရုံးက ဦးလှ ရွှေသည် အစိုးရပိုင်မြေကိုမိမိမြေ အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့် အညီချုပ်ဆို ထား ခြင်း မရှိသော အရပ်စာချုပ်ပေါ်တွင်အခြေပြု၍လည်းကောင်း၊ အချင်းဖြစ် မြေနှင့်အိမ်ကိုမိမိပိုင်ဆိုင်ကြောင်းမြွက်ဟေ ကြညာမှု စွဲဆိုခွင့် မရှိဟုဆုံးဖြတ်ချက်မှာ မှန် ကန်၍ အတည်ပြုကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့ပေသည်။
* သို့ဖြစ်၍ အိမ်ရာဆောက် လုပ်နေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ပါမစ်မြေကိုဝယ်လျှင် ဥပဒေနှင့်အညီပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရသေးပါ။
* အရောင်းအဝယ် ကတိစာချုပ်ချုပ်ဆို၍ ဂရန်သစ်လျှောက်ထားခွင့်ရှိပေသည်။
သို့သော် “ပါမစ်မြေပေါ်ရှိ အဆောက်အအုံအတွက်ပိုင်ဆိုင်မှုကို ဥပဒေနှင့်အညီ စာချုပ်စာတမ်းရုံး၌ မှတ်ပုံတင်အရောင်း စာချုပ် ပြုလုပ်နိုင်” ပါကြောင်းဗဟုသု တအဖြစ်ရေးသားလိုက်ပါသည်။
ထီယု (ဥပဒေ အတိုင်ပင်ခံ)
Land Law -မြေယာဥပဒေ by Than Han on Scribd
Posted by Ko Nge at Wednesday, February 22, 2017